STUPID & ACTIVE ဘလက်… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » STUPID & ACTIVE ဘလက်…
STUPID & ACTIVE ဘလက်…
Posted by black chaw on Nov 1, 2012 in Aha! Jokes, Satire | 37 comments
မောင့်ဘက်တန်က စာအုပ်တစ်အုပ်ထဲမှာ ရေးခဲ့ဘူးတယ်တဲ့ ကျောင်းဒကာတို့ရေ…။
လူတွေမှာတဲ့ Active & Lazy ဆိုပြီး နှစ်မျိုးခွဲလို့ ရပါတယ်တဲ့…။
တက်ကြွလှုပ်ရှားသူနဲ့ မတက်ကြွမလှုပ်ရှားသူလို့ မှတ်လိုက်ရအောင်ပါ…။
ဆိုတော့ ဒီနေရာမှာ Lazy ကို Negative Image နဲ့ မမြင်ကြစေချင်ပါဘူး…။
နောက်ထပ်တစ်ခါ Clever & Stupid ဆိုပြီးလည်း ခွဲလို့ ရပါသေးတယ်တဲ့…။
ဆိုတော့ အဲဒီ Active & Lazy နဲ့ Clever & Stupid တို့ကို
၁။ Clever & Lazy
အဲဒီလူမျိုးကို ဥကဌ ခန့်ပါတဲ့…။
သိတ်လှုပ်ရှားစရာမလိုပဲ ဦးနှောက်နဲ့ စီမံခန့်ခွဲရမယ့်လူမျိုးပေါ့…။
၂။ Clever & Active
သူကတော့ ဦးနှောက်လည်းသုံးရမယ်…လှုပ်လည်း လှုပ်ရှားရမယ့်လူမျိုးပေါ့…။
၃။ Stupid & Lazy
၄။ Stupid & Active
သူတို့က ညံ့ရတဲ့ကြားထဲ တက်ကလည်း တက်ကြွနေသေးဆိုတော့
အဲဒီလိုလူမျိုးတွေကို ရှာပြီး တတ်နိုင်ရင် အဖွဲ့ထဲက အမြန်ဆုံးထုတ်ပစ်ပါတဲ့…။
ကဲ…အဲဒီလူလေးမျိုးထဲမှာ ခင်ဗျားတို့ကရော ဘယ်လိုအမျိုးအစားထဲမှာပါသလဲဆိုတာလေး
အပျော်သဘောပေါ့ဗျာ…။ နည်းနည်း ပဟေဌိအဖြေညှိကြည့်ကြပါလားနော့်…။
Stupid & Active စာရင်းထဲထည့်လိုက်ပါဗျာ…။
ညံ့ဖျင်းရတဲ့ကြားထဲ သူက တက်ကလည်း တက်ကြွနေလိုက်တာ ဖလန်းဖလန်းကိုထလို့…။
လုပ်လိုက်သမျှလည်း တလွဲတွေကို ဖြစ်လို့…။
Stupid & Active ဘလက်…။
(ဇာဂနာ ဟောခဲ့ဘူးတဲ့ စာပေဟောပြောပွဲတစ်ခုကိုနားထောင်ပြီး ရေးခြင်းဖြစ်ပါသည်…။)
ကျွန်မကတော့ Stupid & Lazy ပါ …
ညံ့ရတဲ့ကြားထဲ ပျင်းလဲပျင်းသေးတယ်ဆိုတော့ …
ကျမက tri *( triple stypid & triple lazy ) ပါ ။
နောက်မှ လာပေမဲ့ ထိပ်ဆုံး တက်မန့် တာ ဆိတ်မစိပါနဲ့ ဗျ
မဝေေ၀ နောက်က လိုက်ပါတယ်… မွန်မွန်လည်း အဲ့ဒါရေးမလို့ လော့အင် လုပ်တုန်း မမဝေ ကွန်မန့်အရင်တက်သွားလို့…
Stupid & Lazy မွန်မွန်
Stupid & Lazy မေဖလားဝါး
ပို Stupid ပို Lazy တဲ့ မောင်နိုပါ ခင်ဗျ
ညံ့ကညံ့ ပျင်းကပျင်းနဲ့ သုံးစားမရသူဂျီးပါချင့်… ဟင့် ရှက်လဲရှက်ပါရဲ့ :harr:
သည်လိုဗျာ …ဒီပိုစ့်လေးဖတ်တော့ HR Wizard တွေရဲ့
A(Attitude) M(Mortivation) O(Opportunity) မော်ဒယ်လေးသွားသတိရတယ်…
ဆိုတော့ ဘဘဘလက်ရဲ့ Active/InActive & Smart/Stupid နဲ့ တွဲကြည့်ချင်စိတ်ပေါက်လာတယ်…
ဆိုတော့ Active/ Inactive က Motivation မို့ ပေါင်းလိုက်တော့ စုစုပေါင်း ၄ခု ရသဗျ..
အနှီ အက်ထွီဗျူ လေးခုကို မေးထွစ် ဆွဲလိုက်တော့ … သည်လို လူစား ၁၆ယောက် ရလာပါတယ် ခင်ဗျား…
1Positive (Attitude), Active (Motivation), Get (Opportunity) and Smart Guy	အကောင်းဆုံးပဲပေါ့ဗျာ …
2Positive (Attitude), Active (Motivation), Get (Opportunity) and Stupid Guy	အော်.. အစစ ကောင်းနေတာတောင် ၆၃ကမကျ
3Positive (Attitude), Active (Motivation), Lack (Opportunity) and Smart Guy	ရုန်းကန်ရရှာသူပေါ့ .. စိတ်ကလေးကောင်း လုပ်ချင်ကိုင်ချင်စိတ်ကလေးရှိ ပြီး အခွင့်အရေးမရရှာတဲ့ လူတော်ကလေး..
4Positive (Attitude), Active (Motivation), Lack (Opportunity) and Stupid Guy	သူကျ လုပ်ချင်စိတ်ကလေးတော့ ရှိပါရဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်လည်း မရရှာ ပိန်းကလည်း ပိန်းသေး
5Positive (Attitude), Lazy (Motivation), Get (Opportunity) and Smart Guy ကျန်တာကောင်းလျက်နဲ့ တော်တော်ပျင်းတဲ့ သတ္တ၀ါဗျို့..
6Positive (Attitude), Lazy (Motivation), Get (Opportunity) and Stupid Guy စိတ်ထားလေးကောင်းတဲ့ ဖိုးကံကောင်း ပေါ့ဗျာ ညံ့ပီး ပျင်းတာတောင် အခွင့်အရေးက ရနေသေး
7Positive (Attitude), Lazy (Motivation), Lack (Opportunity) and Smart Guy စိတ်ကောင်းပြီးတော်ပေမယ့် ပျင်းပြီး လုပ်ခွင့်မရတော့ ..ထိပ်တက်နိုင်မယ်မထင်ဘူး ..ဒီအချက်က နံပါတ်-၃က ဆြာနဲ့ ရေရှည်မှာ ကွာသွားမယ့်အချက်ပါပဲ
8Positive (Attitude), Lazy (Motivation), Lack (Opportunity) and Stupid Guy နောက်-၃ခုလုံး စုတ်တယ် ဆိုမှတော့ … ဘာမှ မထူးပါဘူးဗျာ ..အဲ့လိုလူရှောင်တာပဲ ကောင်းပါရဲ့
9Negative (Attitude), Active (Motivation), Get (Opportunity) and Smart Guy	လူရွှင်တော်တွေပြောသလိုပေါ့ …မင်းကအားလုံးကောင်းတယ် တခုပဲပြင်.. သောက်ကျင့် ဆိုတာလို လူစား
10Negative (Attitude), Active (Motivation), Get (Opportunity) and Stupid Guy	သူရှိနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းကတော့ အန္တရာယ်ပါပဲဗျာ ပိန်းပီး စိတ်ဓါတ်မကောင်းတော့ ကြွတက်ပီး အခွင့်အရေးရလည်း …အင်း…
11Negative (Attitude), Active (Motivation), Lack (Opportunity) and Smart Guy	တော်ရဲ့ သားနဲ့ကွယ်..စိတ်ဓါတ်မကောင်းလို့ ကံမကောင်းသလား ကံမကောင်းတာကိုမဲပြီး စိတ်ဓါတ်မကောင်းသလားတော့ မဆိုနိုင်…
12Negative (Attitude), Active (Motivation), Lack (Opportunity) and Stupid Guy	တက်ကြွတာတခုကလွဲရင် ကျန်တာ သုံးစားမရဘူး ..
13Negative (Attitude), Lazy (Motivation), Get (Opportunity) and Smart Guy	သူလည်း တမျိုးပဲ .. စိတ်ဓါတ်မကောင်းလို့ ပျင်းသလား ပျင်းလို့ စိတ်ဓါတ်မကောင်းသလားတော့ မသိ.. ဆက်စပ်ချင်မှလည်း ဆက်စပ်မယ်..စားရမှာလည်း သဲတရှပ်ရှပ်ပေါ့..
14Negaetive (Attitude), Lazy (Motivation), Get (Opportunity) and Stupid Guy	သည်လိုလူစားတွေ အခွင့်အရေးရရနေတာ သိပ်စိတ်ပျက်ဖို့ကောင်းပါရဲ့ဗျို့
15Negative (Attitude), Lazy (Motivation), Lack (Opportunity) and Smart Guy	ဘယ်တော့မှချမ်းသာမှာမဟုတ်တဲ့ မွဲနေတဲ့လူတော်တွေကို ပြောတာဗျ
16Negative (Attitude), Lazy (Motivation), Lack (Opportunity) and Stupid Guy	တေတာပဲ အေးပါတယ်အေ…
ဘာရယ်မဟုတ် ဒီဇိုင်းအလုပ်ကလေး လက်စသပ်လိုက်နိုင်လို့..
ဒီမော်ဒယ် ဘူ့မှ မပြောသေးရင် …
ကျော့် မော်ဒယ်ပေါ့ …ခိခိ..
AMOS Matrix by Inz@ghi (C)
တွေဘာတွေ လုပ်ပစ်လိုက်မယ် ခွစ်ခွစ်…
ညီးကကော နံပါတ်ဘယ်လောက်လဲအေ့ ဆိုက်ကိုးစစ် အဲလေ ဆိုက်ကိုလောဂျစ်စ်ကြီး…
ABC တဲ့ ယောင်ယောင်လေးတော့ ကွဲတယ်။
လက်ဆောင်ပေးထားတာ ။ ဖတ်ပြီး ဆံပင်တွေတောင် ဖြူချင်ချင် ။ facebook ကနေ ပြန် share ခဲ့တယ်။
( အမှန်က ကိုသစ် ပြန်လာချင်အောင် ပြန်ရေးပြတာ။ )
A=Attitude ( သဘောထား )
B=Behavior ( ပြုမူလုပ်ဆောင်ချက် )
C=Contradiction ( ကွဲလွဲခြားနားဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်း )
ဒီနေ့ဘဲ ရေးပြီး တင်တဲ့ အသစ်ပါ မပူးခ်ျရေ။
အဓိက ပွိုင့် ကို “ဟ” ထားပေးတယ် လေ။
ABC ၃ ခုအနက် တခုခုက ဇီးရိုး ဖြစ်ရင် ရလာဒ်=? ပေါ့နော်။
ညီမျှခြင်း ရေးထားပေးတာ တမင်တကာ။
Pattern (ပုံစံ ) ၈ မျိုး စဉ်းစားလို့ရတယ်ခင်ဗျ။
1. A=0, B=0, C=0 total non-conflict (the state of death)
2. A= some value, B=0, C=0
3. A=0, B= some value, C=0
4.A= some value, B= some value, C=0
5.A=0, B=0 , C= some value
6.A= some value, B=0, C=some value
(အဇ္ဈတ္တတိုက်ပွဲပါ၊စိတ်ထဲကတော့ အကြိမ်ကြိမ် “သတ်”နေတာမျိုးပေါ့။ဖြစ်ဖူးကြမှာပါ)
7.A=0, B= some value, C=some value
8.A= some value, B=some value, C=some value
အဲဒီ ညီမျှခြင်းတွေသာ ပြပြီးရေးလိုက်ရင် လူတွေ စိတ်ညစ်ကုန်မှာစိုးလို့
မပူးခ်ျကတော့ စဉ်းစားအားကောင်းသူမို့ လက်ဆောင်နော်။
ဦးဘလက်ပြောတဲ့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးစာလေးကနေ လေးလေးနက်နက်ကြီးဖြစ်အောင်ဆွဲတင်သကိုး…
အဲဒီတော့ ကျွန်တော်လဲ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးဖြစ်အောင်ပြန်ဆွဲချဦးမယ်ဗျာ…
ကျွန်တော်ကို သူငယ်ချင်းတွေက Planner လို့ခေါ်ကြတယ်…
Plan ဆွဲပေးမယ်… ဒါပေမယ့် Operation Run လုပ်ရင် တလွဲချည်းပဲ…
မြန်မာစကားပုံလေးနဲ့ ယှဉ်ပြောရရင်တော့ တွက်ရေးကစက်သူဌေးပေါ့…
(၁) Clever & Lazy လို့ပြောရအောင်လဲ… ကိုယ့်ကိုကိုယ် Clever လို့မခံယူရဲပါဘူး…
Lazy လို့ဆိုရင်တော့ မှန်တယ်ဗျ… တစ်နေရာမှာထိုင်ပြီး တွေးချင်ရာတွေးနေချင်တဲ့လူကိုး…
အရာရာကို Computerize နဲ့ သက်သာရာသက်သာကြောင်းရှာတတ်တဲ့လူမို့ပါ…
(၂) Clever & Active
အဲဒါတော့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာ… ဒီတစ်သက်ဘယ်လိုမှမမှန်းနိုင်တဲ့ကိစ္စ…
(၃) Stupid & Lazy
Lazy ဆိုတဲ့နေရာမှာ မှန်ပေမယ့် ကိုယ့်ကိုကိုယ် Stupid ဖြစ်တယ်လို့တော့မထင်ပါဘူး…
အဲဒီတော့ အဲဒီနေရာမှာလဲ ကိုယ်မပါဘူး…
(၄) Stupid & Active
Active မဖြစ်တဲ့အပြင်… Stupid လဲမဟုတ်ပါဘူ…
(၅) Dreaming & Lazy ပါတဲ့…
ကျွန်တော်လည်း stupid and active ဖြစ်နေလို့
ငှက်ကထကြီးရေ ကျွန်တော့်ကို အမြန်ထုတ်ရပါလိမ့်မယ်…. :harr:
အစပိုင်းတော့…Stupid & Lazy ရောင်းကောင်းနေတာ….
မစ္စတာဂီ ရဲ့A(Attitude) M(Mortivation) O(Opportunity)
မပူးခ်ျ ပြန်ရေးပြသော ဆရာသစ်ရဲ့ABC သီအိုရီ….
(တကယ့် အမှန် ဖြစ်သင့်တာပြောရရင် ဒီရွေးချယ်မှု့ က ကိုယ့်ကိုယ်ကို
လုပ်တာထက် Clever & Activeဖြစ်တဲ့သူတစ်ယောက်ယောက်က
အကဲဖြတ်ပေးရရင် အားလုံးကActive/InActive သာကွာ ရင်ကွာမယ်
အားလုံးက Cleverတွေပါ.. :harr: :hee:
လေး ဘလက် ကျွန်တော်ကတော့ တစ်ခါတလေ…။ တက်ကြွသူ ။ တစ်ခါတလေကျရင် ပျင်းရိသူ … တစ်ခါတလေကျရင် တော် သူ ။ တစ်ခါတလေ ကျရင် ညံ့လွန်းလှသူ….တစ်ယောက်ပါ…။
အထုကြိး မန့်သွားတဲ့မိဂီကြီးရဲ့မန့်ချက်ကိုရော..
ကိုယ့်ဟာကိုယ် stupid လို့ သိလိုက်ကထဲ က stupid မဟုတ်လောက်တော့ဘူး ကဘချော ရေ။
Stupid များဟာ သူတို့ stupid ဖြစ်တာ မသိရှာဘူး လို့ ဆိုတာဘဲ။
အစ်မ ကတော့ stupid ဖြစ်သည်လဲ မဟုတ်၊ stupid မဖြစ်ဘူး လဲ မဟုတ်။
အလယ် မှာ နေရင်ကောင်း တယ် ဆိုလို့။
ဒါကြောင့် သိပ်မကြာခင် လိမ်လိမ်မာမာနဲ့ ကုပ်ကုပ်လေးနေပါတော့မယ် ကျောင်းဒကာရေ….
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ထင်နေတာက Clear& Active (အကောင်းချည်း) :hee:
အခုကိုဘလက်ပြောပြလို့ ဖြစ်ချင်တာက Clever & Lazy :harr:
လူတကာတွေအမြင်မှာက Stupid & Lazy (နည်းနည်း သုံးစားလို့ရမယ်ထင်ပါရဲ့)
တကယ်ဖြစ်နေတာက Stupid & Active (ကန်ထုတ်ပစ်ချင်စရာ)
တက်ကြွခြင်းရဲ့ သင်္ကေတဖြစ်တဲ့ ပထမဆုံးကွန်းမန့်လေးအတွက် ကျေးဇူးပါဗျာ…။
အန်တီဝေက Lazy တော့ ဘယ်နည်းနဲ့မှ မဖြစ်နိုင်…။
တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ သာ ဖြစ်ပါသည်…။
ညံ့ဖျင်းမိုက်မည်းသောသူ တစ်ယောက်မှ မရှိသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
၃ ဆလောက်တောင် Stupid ပြီး Lazy နေသေးသတဲ့…။
ကိုသစ် ကြီးရဲ့ Facebook ပေါ်ကနေ ပြန်ယူလာပေးတာ ကျေးဇူးပါ…။
ကိုသစ်ကိုယ်တိုင်ကြီး လာရှင်းပြမှ နားလည်နိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်း…။
နင့်ဟာနင် မန့်ချင်တဲ့ နေရာတက်သာမန့်ပါ စိန်ဗိုက်ရယ်…။
@ May Flower :
ဟွန့်…သူကလည်း မီသရီး ဆိုပဲ…။
ပို stupid ပို Lazy သူများ
ဒီပို့စ်မှာ ကွန်းမန့်ရေးခြင်း သည်းခံပါခင်ဗျာ…။
ရွေးများရွေးရင် နာသိတယ်နော် နာသိတယ်…။
@ ကထူးဆန်း :
ကိုယ်လိုလူ ရှိမှ ရှိပါ့မလားလို့…
ပို Stupid ပြီး ပို Active ကြစို့ ကထူးဆန်းရေ့…။
ကွန်းမန့်လေးအတွက် ကျေးဇူးပါ အလင်းဆက်ရေ…။
@ မိဂီ :
ဒါတောင် သူက ကျပ်မပြည့်သေးဘူး ဆိုပဲ…။
အိပ်မက်ထဲမှာ နန်းခင်ဇေယျာလေးက ကြောင်၀၀တုတ်တုတ်လေးတစ်ကောင်ကို
ရင်ခွင်ထဲပွေ့ပြီး လက်ကလေးနဲ့ ပွတ်သပ်လို့…
မက်ချင်သလိုသာ ဆက်မက်ပေတော့ ၀တုတ်ရေ…။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုတာ သုံးသပ်တာထက်
တစ်ခြားတစ်ယောက်ယောက်က သုံးသပ်တာက ပိုသင့်တော်မှာပေါ့ဗျာ…။
အားလုံးက Clever တွေပါဆိုလို့ နည်းနည်း မြောက်သွားပါတယ်ဗျာ…။
အစ်မပြောသလိုဆို ကျွန်တော်က သိတ် Stupid ကြီးမဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်…။
အလယ်အလတ်တန်းစား Stupid လောက်ဆိုရင်တော်သေးတာပေါ့ အစ်မရေ…။
အစ်မကိုတော့ အပြင်မှာလည်း မြင်ဘူးထားလို့
Clever & Active စစ်စစ်ကြီး ဖြစ်တဲ့အကြောင်း…။
သတ်ပုံအဖွဲ့ကြီးကိုယ်စား သတ်ပုံ စစ်လိုက်ပါတယ်မမရေ…။
Clever ရေးထားတာ Clear ဖြစ်နေပါတယ်ဗျာ…။
Stupid & Active ဆိုရင်လည်း အားမငယ်ပါနဲ့ဗျာ…။
ကထူးဆန်းနဲ့ ကျွန်တော်တို့ အဖွဲ့မှာ ခေါင်းဆောင်လာလုပ်လှည့်ပါဗျာ…။
@ R Ga :
အမြဲတမ်း ပုံသေ မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော့…။
နာယက ဆိုတာလည်း နည်းတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်မှ မဟုတ်တာပဲ
ကိုယ်တိုင်မှားတော့ ပညာရှိ သတိဖြစ်ခဲ လို့ အဆိုရှိတယ် မဟုတ်လား :harr:
အဆင့်မြင့်ချင်သော်လည်းတကယ်တမ်းကျတော့Stupid & Lazy သာ
ကျွန်တော်က တော့ ကိုငှက် သီချင်းထဲကလိုပဲ ကံအကျိုးပေးနဲ ရတဲ့ အထဲ အပျင်းကလဲ ကြီးသေး ဆိုတဲ့ ထဲမှာပါတယ်ဗျို့
သူဟာနဲ.သူ ရွေးသွားလိုက်ကျတာ… ကျွန်တော်အတွက်တောင်မကျန်တော့ဘူ…
ကျွန်တော်ကတော့ Lazy & Short ပါ……. ပျင်းကပျင်းသေး ပုကပုသေး အဟီးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး
ဦးဘလက်ရေ ကိုယ့်ကိုကိုယ်နှိမ့်ချပီး ထွက်မယ်မကြံနဲ.နော် ဦးမိုက် ကိုတိုင်လိုက်မှာ.. ဟိဟိဟိ …
ရဲဘော်ဘလက် သတိ ညာာာာာာလှည့် ချီတက်…. ဘယ်ညာဘယ်ညာဘယ်ညာ ဘယ်ယ်ယ်လှည့် ရောက်ပီ Prom………. အဟိ
ပြန်တွေးကြည့်တော့ ကိုယ်ကိုကိုယ် မယုံကြည်လို့
မှန်တောင်မကြည့်ဖြစ်တာကတော့ လူရော စိတ်ရောဘဲဗျ။
ကိုယ်ဘာသူကိုယ်တော့ ခေါင်းစဉ်မတပ်တော့ဘူး သူများပေးတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်နေတာက
နိုဗွီကတော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ထားစရာမရှိဖြစ်နေတယ်
စိတ်ကမြန်/ လက်ကမြန်/ ပါးစပ်ကလည်းဆိုး/
ဒေါသကကြီး ….အမလေးးးးးးးးးများလိုက်တဲ့ ဂုဏ်ပုတ်တွေ..
ကိုဘလက်နဲ့ မပူးခ်ျရဲ့ ဘလက်ပူးခ်ျ အသင်းက ဘောလုံးအပေးအယူကောင်းနေပါလားဗျာ။
၁။ ကိုဘလက်ရေးတာက လူ့အကြောင်း မူလစိတ်ထားပုံစံ။
၂။ ညီလေး ဂီဂီ ရေးတာက အဲဒီလူရဲ့ လမ်းကြောင်းတခုခုပေါ်မှာ တကယ်လှုပ်ရှားမှုပုံစံ။
၃။ကျနော်ရဲ့ အေ ဘီ စီ က လူ့ဘဝရဲ့ ပြဿနာနဲ့အဲဒီအပေါ် လူ့စိတ်တုံ့ပြန်တတ်တဲ့ ပုံစံ။
(ကားနဲ့ ဥပမာပေးရရင် ကိုဘလက်က ကားအမျိုးအစား ကို ပြောပြနေတာ။
ညီလေးဂီက အသုံးပြုပုံ၊ တောလမ်းမောင်းလို့ကောင်းတယ် အစရှိဖြင့်ဘယ်ခရီးဆိုမကောင်းဘူးဆိုတာမျိုး။
ကျနော်က ဘယ်လိုဆိုပျက်တတ်တယ်၊ ပျက်ရင်ဘယ်လိုပြင်တယ် ဆိုတာမျိုး မို့ တခုနဲ့တခုမတူပါဘူး)
ဆိုရေးရှိကဆိုအပ်လှဆိုတော့ ABC ကို ရှင်းလင်းစွာသိချင်သူများ
ကျနော့ဆောင်းပါး ကိုသာ ဖတ်ကြည့်ကြပါတော့လို့။
ဟယ် ပညာရှိများ ရှင်းလိုက်ရင် ပြောင်ကရောဆိုတာလို… :harr:
နားမလယ်ဒါ မရှိဒေါ့ဘူးလို ဆိုလိုဒါဘာာာာ
ရွာထဲကို မ၀င်လိုက်နဲ့ ၀င်လိုက်မိတာနဲ့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဆိုတဲ့ ပို့စ် တောင်ဒီလောက် လေးနက်နေတာနော်။
ကိုဘလက်ချောရေ.. Green Rose ကတော့ စိတ်ပါဝင်စားတဲ့ကိစ္စဆိုရင် တတ်ကြွပြီး Plan လည်းထောင့်စေ့အောင်ဆွဲ (ကိုယ့်ဖာသာတော့ ကိုယ် အဲလိုပဲထင်မိတာပဲ)၊ အဲဒီ့ plan ကို run တဲ့အချိန်မှာလည်း အင်မတန်မှ Active ဖြစ် ပေမယ့် ကိုယ်စိတ်မပါတဲ့ကိစ္စဆိုရင် အင်မတန်မှ ထုံထိုင်းပြီး အပျင်းကြီးတာပါ။
နောက်ပြီး တစ်ခါတစ်ခါ အများနဲ့တစ်ယောက်တောင် ကန့်လန့်တိုက်ပြီး ကိုယ်မှန်တယ်ထင်ရာကို (တစ်ခါတစ်ခါ မှားမှန်းသိသိကြီးနဲ့ သူများပြောတာလက်မခံချင်လို့) ဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့ မဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်တတ်တာမျိုးဆိုတော့ လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက် အန္တရယ်ကြီးတဲ့လူမျိုးထဲမှာလည်း ပါသေးတယ်ထင်တယ်။
ပြောပြကြပါ Green Rose က ဘယ်အုပ်စုထဲမှာပါတာလဲဟင်… ဒီအတိုင်းဆိုရင်တော့ ရွာပြင်များ အထုတ်ခံရမလားမသိ ဟီ.. ဟိ
(သြော် ကိုအင်ဇာဂီရဲ့ comment ရယ်၊ မ Pooch ရဲ့ comment ရယ်ကိုတော့ အချိန်ယူပြီးဖြေးဖြေးဖတ်ဖို့ Print ထုတ်သွားမယ်.. ခုတော့ ခေါင်းမူးချင်လာပြီ)
ထူချင်တဲ့နေရာ သူများတဲ့ထူ (အသိခေါက်ခက် အဝင်နက်)
တော်ပြန်ရင်လဲ သူများထက်တော် (တလွဲဆံပင်ကောင်း)
ပျင်းချင်ရင် သူများထက်ပျင်း (အလုပ်အကိုင်)
တက်ကြွရင်လဲ သူများထက်သာ (အပျော်အပါး)
ကြားထဲက “ဂွ” ဖြစ်နေတဲ့ မောင်ကျောက်ကို ဘယ်ချောက်ထဲ ကန်ချမတုံး ခင်ဗျ…
When I went job interview, I’d get to take PILI test. The boss gave meapaper written the same Personal Index and Liable Index on both pages, kinda friendly, relax, active, lazy, blah blah. First page I have to choose what kind of people I am and second page page I have to choose what other think who I am.
So to answer the question, I think I am kinda lazy and stupid but I want other think I am awesome
အင်း….ကိုယ့်ကိုကိုယ် တွေးကြည့်မိတော့ မိချစ်ရေ တို့အဖြစ်က ဒီလိုကြီးလား။
တလွဲတွေ လုပ်မိတဲ့ နေရာမှာတော့……..Clever (စာရေးဆရာ နီကိုလွဲရဲ့စာတွေမှ ကြိုက်မိတာကိုး)
ဖွန်ကြောင်တဲ့ နေရာမှာတော့……………..Active (ဗီဇ ဆိုတာ ဖျောက်လို့မှ မရဘဲကိုး)
အလုပ်အကိုင်မှာတော့………..Lazy(ထိုင်နေရင်တောင် ဒူးနန့်ဖို့ ပျင်းတဲ့ကောင်)
ရွာသူတွေ ကြိုက်ကုန်ကြမှာ စိုးလို့ Low profile နဲ့နေ,နေတာ။
မနေသာလို့သာ တို့က အတင်းအာပလာ ရှင်းလင်းပွဲ ဝင်လုပ်ပေးတာ။ဟွန့်……ဒီကကောင်က နယ်နယ်ရရ မဟုတ်ဘူး။
Clever & sometime lazy … sometime active ဆိုရင်ရော … ဘာလုပ်ရမလဲ … ?
သများကလေ Clever & Lazy လို့ထင်တာ တကယ်တမ်းကျတော့
Positive (Attitude), Active (Motivation), Get (Opportunity) and Smart Girl ဖြစ်နေတာတော့။
နောက်ပီး Positive Attitude+Good Behavior+ Cooperation sense ကလဲ ရှိတော့လေ…..
ဆက်ပျောရင် မနာလိုဖစ်ကုန်ကျတော့မယ် ခိခိ။